विशेष Archives - पोखरा समाचार
२८ पुष २०७५, शनिबार १२:२३ 12/01/2019 पोखरा समाचार
पोखरा । १६ औं चरणको सत्याग्रह थालेको डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य जटिल बन्दै गएको छ । इलाममा सत्याग्रह सुरु गरेको चौथो दिन शनिबार उनको स्वास्थ्यमा जटिल समस्याहरु देखिन थालेका हुन् । चिकित्सकहरुले बिहान उनको स्वास्थ्य परीक्षण गरेका थिए ।शुक्रबारसम्म भूइँमै सुतिरहेका केसीलाई आजबाट आफ्नो शरीर थाम्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि बेडमा सारिएको छ । यसैबीच चिकित्सा क्षेत्र सुधारको माग गर्दै अनसनमा बसेका डा. केसीको मागप्रति ऐक्यवद्धता जनाउने क्रम पनि बढ्दै गएको छ । सरकारसँग भएको सहमतिअनुसारकै चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पास गर्नुपर्नेलगायतका ६ बुँदे माग गर्दै डा. केसी गत बुधबारदेखि सत्याग्रहमा…
पोखरा । काठमाडौँबाट मात्रै हुँदै आएको श्रम स्वीकृति अब गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखराबाट पनि हुने भएको छ ।आज देखि नै श्रम स्वीकृति दिने गरी केन्द्र सरकारको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पोखराबाट पनि श्रम स्वीकृति दिने भएको हो । वैदेशिक रोजागरीमा जाने कामदारहरुको सहजता लागि पोखराबाटै श्रम स्वीकृति दिन थालिएको छ । श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले दुई जना युवालाई पुन श्रम स्वीकृति दिएको राहदानी दिएर शुरु गरे । मन्त्री विष्टले स्याङजाका खड्क बहादुर गुरुङ र नवलपरासीका चन्द्रमान गुरुङलाई राहादानी दिए । चन्द्रमान १८ बर्ष देखी मकाउमा कामका लागि आउने जाने…
पोखरा । पुसको पहिलो साताबाट हिउँदे अधिवेशन बस्ने सहमति गर्दै बर्खे अधिवेशन असोज २३ मा सकिएको थियो तर राजधानी र प्रदेशको नाममा सहमति नजुट्दा प्रदेश १ को हिउँदे अधिवेशन आह्वानबारे अझै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । त्यती मात्र होइन साझा सूचीमा रहेका विधेयक अझै पारित गरिएको छैन । त्यसैगरी स्थायी राजधानी र नामाङ्कनका विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा र प्रदेश सरकारले प्रदेशसभालाई छलफलका विषयवस्तु उपलव्ध गराउन नसक्दा समयमै प्रदेशसभाले हिउँदे अधिवेशन पर धकेलिएको हो । प्रदेश सरकारले बर्खे अधिवेशन अन्त्य गर्न लाग्दा आउँदो हिउँदे अधिवेशनमा प्रदेशको नामाङ्कन र स्थायी राजधानी टङ्गो…
२३ पुष २०७५, सोमबार ०८:२६ 07/01/2019 पोखरा समाचार
पोखरा । नवलपुरको मध्यविन्दुमा यात्रुबाहक बस पल्टिदा २३ यात्रु घाइते भएका छन् । पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत मध्यविन्दु ११ बाहुनेकुनामा सोमबार बिहान करीव ३ बजेतिर बस दुर्घटना भएको हो । सुर्खेतबाट काठमाडौं जानका लागि आउँदै गरेको ना ५ ख ४६९६ नम्बरको बस अनियन्त्रित भै पल्टदा दुर्घटना भएको थियो । बस सडकबाट करीव १०० फिट उत्तर साइडमा पल्टिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरले जनाएको छ । बसमा सवार ३४ जना यात्रुमध्ये २३ जना घाइते भएको र उनीहरूलाई चितवनको भरतपुरस्थित पुरानो मेडिकल कलेजमा उपचार गर्न पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ । घाइतेहरु सुर्खेत, कालिकोट,…